3Am War Wakunamata Pfungwa Pfungwa | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 3Amondo ehondo Yekunamata Mapepa
3Amondo ehondo Yekunamata Mapepa
2 Vakorinde 10: 3 10 Nekuti kunyangwe tichifamba munyama, hatirwi tichitevera nyama: 4: 10 (nekuti zvombo zvehondo yedu haizi yenyama, asi ane simba kubudikidza naMwari kusvika pakuputsa nzvimbo dzemasimba.) 5 vachikanda pasi mifungo, nechinhu chose chakakwirira chinozvikwidziridza pazivo dzaMwari, nekuisa mufungwa dzese kuterera kwaKristu;
Hondo dzeMweya ndedzechokwadi, uye dzinokunda kana kuraswa paatari yeminamato. Kunyangwe isu tichigara munyama, asi isu hatirwi nemitoo yenyama, ndiko kuti, kuti hondo dzedu muhupenyu hazvisi nevamwe vedu, asi ivo vane masimba emweya, mauto anorwira hupenyu hwedu uye zvinotarisirwa. Mwana wega wega waMwari uyo anofanira kukunda muhupenyu anofanira kudzidza maitiro ekurwa muhondo yemweya achipesana neizvi masimba erima. Nhasi tichave tichiita 3am hondo dzehondo munamato. Izvi zvehondo munamato mapoinzi inokupa iwe simba rekukunda iyo yakasimba masimba ehupenyu uye kubuda munhu anokunda munharaunda yako yekufona.
Nei 3am kurwa hondo munamato? Nzvimbo dzekunamatira zvehondo dzinoitwa zvakanyanya pakati pehusiku kana mangwanani-ngwanani, izvo zviri pakati pemaawa na12 mangwanani na3 mangwanani. Dhiabhori nevamiriri vake vanogara vachishanda husiku, varume vachirara (Ona Mateo 13:25). Kana iwe uchikunda Dhiabhori nevamiriri vake, iwe unofanirwa kupihwa kuminamato yehondo pa pakati pousiku. Varoyi nevaroyi pavanoda kurwisa iwe, vanozviita panguva yehusiku, vanoziva kuti vanhu vari munjodzi yake husiku, Iye anotumira miseve panguva yepakati pehusiku. Saka kana iwe uchida kuenda kuhondo kumusasa wevavengi, iwe unofanirawo kumuka pakati peusiku maawa kuti uite muhondo dzekunamatira nzvimbo. Aya 3am ehondo dzekunamatira mapoinzi achakupa simba rekukunda iwe simba rerima uchirwa nekwaunoda.
1.Musuwo wese uye manera ekupinda kwaSatani muhupenyu hwangu, ngaabviswe zvachose neropa raJesu.
2. Ini ndinosunungura kubva pakutuka, nekumeso, kutsemuka, zvihwitsi uye kutonga zvakaipa, zvakandirwisa kubudikidza nezviroto, muzita raJesu.
3. Iwe masimba asingadi Mwari, ndisunungure nemoto, muzita raJesu.
4. Zvese zvakapfuura satani akakundwa muchiroto, shandurwa kuve kukunda, muzita raJesu.
5. Zvese bvunzo muhope, shandurwa kuve ufakazi, muzita raJesu.
6. Miedzo yose iri muchiroto, shandurwa kuve kukunda, muzita raJesu.
7. Kutadza kwese muhope, shandurwa kuve mukubudirira, muzita raJesu.
8. Mavanga 'ese muchiroto, shandurwa kuve nyeredzi, muzita raJesu.
9. Husungwa hwese muchiroto, shandurwa kuve rusununguko, muzita raJesu.
10.Kurasikirwa kwese muhope, shandurwa kuve mibairo, muzita raJesu
11. Chero mweya yemvura kubva mumusha medu kana munzvimbo yekuzvarwa, yekuita huroyi kwandiri uye nemhuri yangu, ngaigurwe neshoko raMwari, muzita raJesu.
12. Chero simba reuroyi, rakabata chero angu makomborero muhusungwa, gamuchira moto waMwari uye urisunungure, muzita raJesu.
13. Ndinosunungura pfungwa dzangu nemweya kubva muhusungwa hwevaroyi vezvemanzini, muzita raJesu.
14. Chero huroyi hupi hwehumwe hunosunga maoko angu nemakumbo kubva mukubudirira, kutyora nekupaza-pwanya, muzita raJesu.
15. museve wese, wakapfurwa muhupenyu hwangu kubva pasi pemvura chero huroyi, buda mandiri udzokere kune watumira, muzita raJesu.
16. Chero chipi zvacho chakashata, chakaiswa mumuviri wangu kuburikidza nekuwonana neanoda chero rima rerima yakagochwa nemoto, muzita raJesu.
17. Chero zvakaipa chero zvazvakandiitirwa kusvika parizvino kubudikidza nekurohwa kweuroyi uye nekunyengedzwa, ngazvidzore neropa raJesu.
18. Ini ndinosunga huroyi hwese hunodzora nemweya yakasvibisa mweya, muzita raJesu.
19. Ndakakanda museve wese weuroyi uchibata zveshuwa (kuona, munhuwi, kuravira, kunzwa), muzita raJesu.
20. Ini ndinoraira museve wega wega kuti ubude kubva mumuviri wangu izvozvi muzita raJesu
21. Ini ndauya kuZion, mafambiro angu anofanirwa kushanduka, muzita raJesu.
22. Chero simba rinotambisa mafambiro angu, wira pasi ufe, muzita raJesu.
23. Ini ndinoramba kupotsa destiny yangu muhupenyu, muzita raJesu.
24. Ini ndinoramba kugamuchira satanic chinzvimbo changu chemumoyo, muzita raJesu
25. Chero chipi zvacho chakarongwa kupokana nemugumo wangu kumatenga, ngavazungunuke, muzita raJesu.
26. Simba rega rega, rinokwevera masimba kubva kumatenga kumisidzana neni, dziwire pasi uye ufe, muzita raJesu.
27. Yese satanic atari, yakagadzirirwa kupokana neni, bvarura nepakati, muzita raJesu.
28. Ishe, bvisai mugumo wangu pamaoko avanhu.
29. Ini ndinodzora umwari hwese hwaSatani hwenzvimbo yangu, muzita raJesu.
30. satan, haungagare pane zvandinogadzirira, muzita raJesu
Previous nyayaPfungwa makumi matatu Eminamato Yekutenda Ino Fambisa Makomo
inotevera30 Njodzi Dzeminamato Yekunamatira Pamurume weMweya wemuMarine
conhe Chikumi 16, 2020 Panguva ya5: 34 pm
Maita basa nemunamato. Zvinondibatsira pandinowana nzira yangu yekudzoka kuna Mwari uye inondibatsira pandinenge ndisingakwanise kurara.
Zoleka Chikunguru 31, 2020 At 1:01 am
Kuna Mwari kuve golry
Kimj Gunyana 11, 2020 At 8:37 am
Ann Gunyana 20, 2020 At 7:15 am
Hareruya (nguva nomwe)
Ndatenda nemutsa nekuda kwemapoinzi. Zvinobatsira chaizvo pandinofanira kunamata asi ndisingakwanise kuwana mazwi acho.
Mpuga Assy Gunyana 23, 2020 At 12:39 am
nyasha Gunyana 25, 2020 At 12:50 am
Amen 🙏 Amen Amen muzita raJesu
Doreen Zvita 15, 2020 At 12:13 am
Ameni ameni uye ameni. Zita raIshe ngarirumbidzwe. Kukunda ndekwaJesu. Hareruya.
Nakalyango linda Teopisata Zvita 24, 2020 At 9:09 pm
Rumbidzai Jehovha, O mweya wangu, namatai zita rake dzvene. Mwari ngarikudzwe zita renyu. Ameni
Kate Ekwere Kubvumbi 18, 2021 At 3:01 am
Ndinokutendai Mweya Mutsvene waMwari, Baba zvinogona chete kuva imi muhupenyu hwedu, handizivi kuti ndingadai ndakavei ndisipo, ndinokutendai Jesu akanaka, zita renyu moga ngarikudzwe muzita rine simba raJesu
Kaone Makhaya Chivabvu 11, 2021 Na9: 52 am
Eunice chebet Kubvumbi 25, 2021 At 12:27 am
Ameni naAmeni… kukunda ndekwaJesu. Ndiwe chete Jesu.kana uri wedu saka hapana uye hapana angave anopesana nesu. Ndatenda Jesu
Mugide Nazima Chivabvu 17, 2021 nenguva dza 9:23 pm
Ndiri kunyatso kuonga izvi zvekunamatira mapoinzi nekuti zvakaita kuti hupenyu hwangu huve nyore nguva yandinoiverenga thank you Jesus may u name be mbiri uye ndinokutendai imi munyori wemunamato wakanaka uyu GBU
Phetsile Chivabvu 22, 2021 Na1: 32 am
Ameni muna Jesu Kristu zita rekukunda nderedu… ndinofarira zvikuru minamato iyi inovhura nzira dzangu nekujekesa zviroto zvangu..ndiri kukwanisa kurwisa vavengi vangu uye nekugona kuziva zvavanoronga vasati varwisa ..
othusitse June 2, 2021 Pa 12: 58 am
mbiri ngaive naJesus, masimba ese akapiwa kwaari, zvinonzi namata utsvage uye zvichapihwa ,,, ndinozorora hupenyu hwangu kwaari uye achandirwira mabhatles ese ini. Ameni
Brenda Thandiwe Hove Chikunguru 20, 2021 At 8:06 am
Simba, Ndatenda Jesu.
AMEN uye AMEN KUKUDZWA KUNA MWARI.